किन भाडियो बाम र मधेशवादी दलहरुको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने तयारी ? | We Nepali
नेपालको समय: ०७:४४ | UK Time: 02:59
किन भाडियो बाम र मधेशवादी दलहरुको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने तयारी ?
२०७४ माघ ९ गते १४:५४
काठमाडौं–मंगलबार बाम गठबन्धन र मधेशवादी दलहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ नं. प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने कुराले काठमाडौंको राजनीतिक माहोलमा चर्चा कमायो । उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन विहानै मधेशवादी दलले कांग्रेसलाई २ नं. प्रदेशमा बढार्ने योजनासहित तालमेलका लागि गठबन्धन सामु प्रस्ताव राख्यो ।
जबकी अघिल्लो दिनसम्म मधेशवादी दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेससँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ नं प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने तयारीमा थिए । तर, सिटको संख्या नमिलेपछि कांग्रेसबाट अलि टाढिएका मधेशवादी दलहरुले विहानै बाम गठबन्धनसँग निर्वाचनमा सहकार्यको प्रस्ताव राखे ।
अझ रोचक त के भने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलबीच आंशिक गठबन्धन समेत भएको थियो । मधेशवादी दलका केही नेताहरुलाई जिताउन नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारहरु नै फिर्ता बोलाएको थियो ।
तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा मधेशवादी दलहरु कांग्रेसलाई छाडेर बाम गठबन्धसम्म गृहकार्य गर्ने प्रयासमा लागे । तर, अन्तिम समयमा त्यो पनि सफल हुन सकेन् ।
बाम गठबन्धन २ नं प्रदेशबाट कांग्रेसलाई बढार्नका लागि ८ सिटमा तालमेल गर्न दुवै पक्ष सहमत थिए । जसका लागि मधेशवादी दलहरुले ६ सिट मागेका थिए भने वाम गठबन्धनले ५ सिट लिन प्रस्ताव गरेको थियो । गठबन्धन गरेपछि फाइदा हुने एक एक सिट बाँडने गरी तयारी भएको थियो ।
तर, त्यो तयारी असफल भएको छ । त्यसको कारण त्यहाँ सिट संख्या कुरा नमिल्दा होइन् । भएको के रहेछ भने मधेशवादी दलहरुले बाम गठबन्धनसँग राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर प्रदेशको सीमांकन फेरबदलमा सहयोग गर्ने बाचा मागेका रहेछन् । अनि बाम गठबन्धनका नेताहरुले भने १ सिटका लागि त्यस्तो बाचा गर्न अस्वीकार गरे ।
यही नै बाम गठबन्धन र मधेशवादी दलहरुबीच २ नं. प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल नहुनुको प्रमुख कारण बन्यो ।